Fisamborana sy fanagadrana: mitaky lalàna hiarovana azy ireo ben’ny Tanàna | NewsMada
Fisamborana sy fanagadrana: mitaky lalàna hiarovana azy ireo ben’ny Tanàna
Mahatsiaro ho tratran’ny antsojay ka mitaky hanana zo tsy azo enjehina koa ? Nam­piaka-peo ireo ben’ny Tanàna any amin’ny distrikan’i Fan­driana, nihaona tamin’ny loholona, Rasolondratsimba Raymond, fa maromaro ireo naman’izy ireo, tratran’ny fanenjehana na fanagadrana. “Tsy mba misy lalàna miaro manoloana ny fisamborana ireo ben’ny Tanàna fa samborina amin’ny tsy misy dikany izahay”, hoy izy ireo. Olana mianjady amin’ireo kaominina maromaro ny fanenjehana ben’ny Tanàna noho ny fitan­tanam-bola, voalaza fa tsy mazava na tsy manara-dalana.
Tsy fahampian’ny volan’ny kaominina
Nambaran’ny loholona sady mpiahy azy ireo fa tsy tokony hisy intsony mpitantana eny ifotony tsy mahavita ny andraikitrany na higadragadra fahatany. Notsiahiviny fa maro ny antony mahatonga ny ben’ ny Tanàna ho voaenjika. Eo ny tsy fahampian’ny tetibola ka voatery manova ny fomba fitantanana, tsy mifanaraka amin’ny lalàna mba hanan­taterahana ny asa. Eo koa ny tsy fahampian’ny vola ka voatery mamoaka am-paosy. Ma­nolo izany amin’ny volan’ny kaominina avy eo. “Tsy mazava koa ny lalàna ka mahavoa­saringotra tsy amin’ antony. Ekena koa fa misy ireo man­dika lalàna”, hoy ihany izy.
Fiofanana momba ny fahaiza-mitantana
Nohitsiny koa fa tokony hanao tatitra sy fandrafetana ireo fangatahana laharam-pahamehana ny kaominina ka mandefa azy ireo eny amin’ny tomponandraikitra.
Tsy main­tsy mihaino ireo ben’ny Ta­nàna koa anefa ireo minisitera, governora ary talem-paritra, fa anisan’ny nanendrena azy ireo izany, araka ny nambarany. “Tsy maintsy mamaly ny filan’ ny eny ifotony izy ireo”, hoy ihany izy.